मजदुरको नाममा नक्कली फर्म बनाएर राजस्व छलिएका छन् । कृषि फर्ममा लागि लिइएका कृषि अनुुदान अपचलन भएका छन् । विपन्न महिलाका लागि दिइने सहुुलियत कर्जा टाठाबाठा र सम्भ्रान्त महिलाहरुले लिएका छन् । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कुुहिएको अखाद्य चामल पखालेर बिक्री गरिरहेको छ । मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । निर्माणको ठेक्का लिएर काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुले अझै थुपै्रै ठेक्का पाइरहेका छन् । कर चुक्ता नगरेको कम्पनीले अरु काम गरिरहेको छ ।
यी विकृतिका केही उदाहरण मात्र हुुन् । यस्ता विकृति, विसङ्गति र अनियमितता हाम्रो मुुलुकमा जताततै पाइन्छ । के यस्ता विकृति यसको एउटा पक्ष मानिएको निजी क्षेत्रले मात्र गर्न सक्छ ? यो कदापी हुुन सक्दैन । यसमा अर्को पक्ष नियमनकारी निकाय हुन्छ, त्यो सरकार हो । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको संलग्नताविना यस्ता कुुनै अनियमितता हुुनै सक्दैन ।
अहिले जननिर्वाचित दुुई तिहाइ बहुुमतको शक्तिशाली सरकारले निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष देखाएर कारबाही अघि बढाएको छ । हरेक ठाउँमा दुुई पक्ष हुन्छ । सहुलियत कर्जा लिएर दुुरुपयोग गर्नेलाई अनुुगमन गर्नेले के ग-यो भनेर पनि केलाउनुु पर्दछ । दिनै नहुुने व्यक्तिलाई बैंकले किन सहुुलियत कर्जा दियो भनेर सरकारले छानबिन नगरी कर्जा लिनेलाई मात्र कारबाहीको दायरामा तान्नुु न्यायसम्मत हँंदैन । कर्जा दिने र त्यसको अनुुगमन गर्ने पक्षलाई पनि समेटेर छानबिन गर्नुपर्दछ । अनि त्यसको आधारमा कारबाही हुँदा समन्याय हुुन्छ । अन्यथा न्यायको नाउँमा विभेद हुुन जान्छ ।
बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले कसको आड र भरोसामा शुल्क फिर्ता गर भन्दा पनि गरिरहेका छैनन्, भन्ने कुरा पहिला छानबिन गरिनुु पर्दैन ? जनतालाई कुहिएको चामल खुुवाउने को हो ? त्यसको समग्र छानबिन नगरी एकाङ्गीरुपमा कारबाही गरिनुु हँुुदैन । आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने मजदुरहरुको नाउँमा फर्म खोलेर राजस्व छल्ने र नक्कली भ्याटबिल बनाएर कारोबार गर्ने व्यक्ति यहाँ प्रशस्त रहेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले एक्लैले यो सबै काम गरेको त हुँदैन ।
को–को छन् त्यसमा संलग्न भन्ने कुराको छानबिन नगरी त्यो मजदुरलाई मात्र कारबाही गर्नुु भनेको मुख्य अपराधीलाई जोगाउनुु हो । यस्ता हरेक कुर्कममा सरकारी कर्मचारी जोडिएको हुन्छ । तर, अहिलेसम्मको कारबाहीमा कर्मचारी पक्ष तानिएको छैन र यही कारणले त्यो वर्गले केही हुन्न भनेर ढुुक्कसँग बसेको मात्र छैन, उही धन्दा चालू राखेको छ । त्यही कारणले हाम्रो समाजमा यस्ता विकृति घट्नुुको साटो झन् बढिरहेका छन् । यसलाई रोक्न ती घटनामा संलग्न कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन गरी उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुु पर्दछ । अनि मात्र यस्ता विकृति दोहोरिँदैनन् ।